Trump oo ku wareeray sida uu u daawanaayay Tvyada | Dhacdo
Home Wararka Maanta Trump oo ku wareeray sida uu u daawanaayay Tvyada
Trump oo ku wareeray sida uu u daawanaayay Tvyada
Waxay yidhaahdeen ilahaas ku dhaw madaxweynaha wuxuu daawanayay TV-yo badan, wicitaano ayuu sameynayay, wuxuuna waqtigiisa Jimcaha u kala qeybinayay Xafiiska Oval iyo hoygiisa.
Sida talaabooyinka xiga ee dacwadda, ilaa wax muhiim ah laga arkayo, dhammaantood waxaa isha lagu wada hayaa Pennsylvania. Haddii farqiga uu dhexeeyaa yar yahay, tartanka Maxkamadda Sare oo uu ku guuleysto ayaa caawin kara Trump.
Haddii laakiin se farqiga guushu u janjeedho dhanka Biden, kiiska Pennsylvania wax macno ah ma lahan. Waxaana kooxda sharciga u qaabbilsan ay awoodda saari doonaan gobollada kale.
Previous articleFaah faahin: Qaraxii caawa Wasiir Duraan lagula eegtay Magaalada Muqdisho
Next articleGuddoomiyaha Aqalka Sare oo ka soo horjeestay Guddi xalay uu magacaabay R/Wasaaraha